အပြိုတှမှော သားအိမျတှငျးထညျ့ သန်ဓတေားပစ်စညျး ထညျ့လို့ ရ၏/မရ၏ - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ရှေးခယျြစရာ သန်ဓတေားနညျးမြားစှာရှိသညျ့အနကျ သားအိမျတှငျးထညျ့ သန်ဓတေားပစ်စညျး(IUD)သညျလညျး တဈခုအပါအဝငျပါ။
-သန်ဓအေောငျနိုငျစှမျးအပျေါသကျရောကျမှုမရှိတာမို့ ကလေးလိုခငျြတဲ့အခါ အခြိနျမရှေးပွနျပွီး ကိုယျဝနျယူနိုငျခွငျး……စတဲ့အားသာခကျြတှကွေောငျ့ သားအိမျတှငျးထညျ့သန်ဓတေားပစ်စညျးကို အသုံးပွုလိုသူမြားပွားလှသျောာလညျး …..အမြိုးသမီးမြားအနနှေငျ့ တဈဖကျက စိုးရိမျမိတဲ့ အခကျြလေးတှလေညျး ရှိနပွေနျတယျ။
-ယငျဖိုတောငျမသမျးဖူးသေးတဲ့ အပြိုတှမှော ထညျ့လို့ရပါ့မလား?
– ရမေရောတဲ့ အပြိုစဈစဈတှေ မင်ျဂလာဆောငျတော့မှာမို့ ဒီပစ်စညျးလေးကွိုထညျ့၊ ကိုယျဝနျကွိုတားထားခငျြလား? ရပါတယျ။
ဒီပစ်စညျးလေးထညျ့မယျဆိုရငျ ကြှမျးကငျြတဲ့ဆရာဝနျက လိုအပျတဲ့ ကိရိယာလေးတှေ အသုံးပွုပွီး စနဈတကထြညျ့ပေးမှာဖွဈပါတယျ။ ဘဲနှုတျသီးပုံ ကိရိယာကို မိနျးမကိုယျထဲ ထညျ့မယျ၊ နောကျ….သားအိမျအဝ(သားအိမျခေါငျးကို ခြဲ့ပေးတဲ့ ကိရိယာလေးသုံးပွီးခြဲ့မယျ၊ ပွီးရငျ အဆိုပါသန်ဓတေားပစ်စညျးလေးထညျ့မယျ။အပြိုတှအေနနေဲ့တော့ အနညျးငယျ တငျးကပျြကပျြ…..သကျတောငျ့သကျသာမရှိသလို ခံစားရနိုငျပမေယျ့ ဒါဟာ ခဏပဲဖွဈပါတယျ။ဒီပစ်စညျးထညျ့တာ အခြိနျလညျးမကွာပါဘူး။ IUD ထညျ့ပွီးနောကျ ဆီးစပျတဈဝိုကျအနညျးငယျနာနိုငျသျောလညျး နောကျတဈရကျလောကျနရေငျ ပုံမှနျပွနျဖွဈသှားမှာဖွဈပါတယျ။ IUD စထညျ့ထညျ့ခငျြး တဈလ နှဈလမှာ ရာသီသှေးပမာဏပုံမမှနျတာ၊ ရာသီလာလြှငျ ဆီးစပျကိုကျတာမြိုးရှိနိုငျပမေယျ့ ၃လလောကျကွာတဲ့အခါ အားလုံးပုံမှနျပွနျဖွဈသှားပါလိမျ့မယျ။
-ကဲ…အပြိုတှတေောငျ သုံးလို့ရတယျဆိုမှတော့ ကလေးမမှေးထားဖူးတဲ့ အိမျထောငျသညျတှလေညျး သုံးလို့ရပွီပေါ့နျော။
-ဒီပစ်စညျးထညျ့ရငျ နာမှာလားဆိုတော့…..အထကျမှာ ပွောပွခဲ့သလိုပါပဲ…အနညျးငယျနာနိုငျပမေယျ့ အခြိနျတိုအတှငျး သကျသာသှားမှာဖွဈပါတယျ။ဒါ့အပွငျ လဒေီယာ(Lydia)ကထုတျတဲ့ သားအိမျတှငျးထညျ့သန်ဓတေားပစ်စညျးတဈမြိုးဖွဈတယျ့ Copper Y(ကော့ပါး ဝိုငျ)ဟာ အရှယျအစား ပိုမိုသေးတာကွောငျ့ ပိုထညျ့ရလှယျပွီး သကျတောငျ့သကျသာပိုရှိပါတယျ။အပြိုတှနေဲ့ ကလေးမမှေးဖူးသူတှမှောဆိုရငျ ဒီလို IUD အမြိုးအစားက ပိုမိုသငျ့တျောပါလိမျ့မယျ။
-လတျတလော ကိုယျဝနျလညျးတားခငျြတယျ…တဈခြိနျကြ ကလေးယူဖို့လညျး အစီအစဉျရှိတယျ…ဆိုရငျ
သားအိမျတှငျးထညျ့သန်ဓတေားပစ်စညျးသညျလညျးပဲ…အပြိုရော အိမျထောငျရှငျမြားပါ ရှေးခယျြနိုငျတယျ့ ထိရောကျတဲ့ နညျးလမျးတဈခုဖွဈပါကွောငျး …….
အပျိုတွေမှာ သားအိမ်တွင်းထည့် သန္ဓေတားပစ္စည်း ထည့်လို့ ရ၏/မရ၏
ရွေးချယ်စရာ သန္ဓေတားနည်းများစွာရှိသည့်အနက် သားအိမ်တွင်းထည့် သန္ဓေတားပစ္စည်း(IUD)သည်လည်း တစ်ခုအပါအဝင်ပါ။
-သန္ဓေအောင်နိုင်စွမ်းအပေါ်သက်ရောက်မှုမရှိတာမို့ ကလေးလိုချင်တဲ့အခါ အချိန်မရွေးပြန်ပြီး ကိုယ်ဝန်ယူနိုင်ခြင်း……စတဲ့အားသာချက်တွေကြောင့် သားအိမ်တွင်းထည့်သန္ဓေတားပစ္စည်းကို အသုံးပြုလိုသူများပြားလှသောာ်လည်း …..အမျိုးသမီးများအနေနှင့် တစ်ဖက်က စိုးရိမ်မိတဲ့ အချက်လေးတွေလည်း ရှိနေပြန်တယ်။
-ယင်ဖိုတောင်မသမ်းဖူးသေးတဲ့ အပျိုတွေမှာ ထည့်လို့ရပါ့မလား?
– ရေမရောတဲ့ အပျိုစစ်စစ်တွေ မင်္ဂလာဆောင်တော့မှာမို့ ဒီပစ္စည်းလေးကြိုထည့်၊ ကိုယ်ဝန်ကြိုတားထားချင်လား? ရပါတယ်။
ဒီပစ္စည်းလေးထည့်မယ်ဆိုရင် ကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်က လိုအပ်တဲ့ ကိရိယာလေးတွေ အသုံးပြုပြီး စနစ်တကျထည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘဲနှုတ်သီးပုံ ကိရိယာကို မိန်းမကိုယ်ထဲ ထည့်မယ်၊ နောက်….သားအိမ်အဝ(သားအိမ်ခေါင်းကို ချဲ့ပေးတဲ့ ကိရိယာလေးသုံးပြီးချဲ့မယ်၊ ပြီးရင် အဆိုပါသန္ဓေတားပစ္စည်းလေးထည့်မယ်။အပျိုတွေအနေနဲ့တော့ အနည်းငယ် တင်းကျပ်ကျပ်…..သက်တောင့်သက်သာမရှိသလို ခံစားရနိုင်ပေမယ့် ဒါဟာ ခဏပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပစ္စည်းထည့်တာ အချိန်လည်းမကြာပါဘူး။ IUD ထည့်ပြီးနောက် ဆီးစပ်တစ်ဝိုက်အနည်းငယ်နာနိုင်သော်လည်း နောက်တစ်ရက်လောက်နေရင် ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ IUD စထည့်ထည့်ချင်း တစ်လ နှစ်လမှာ ရာသီသွေးပမာဏပုံမမှန်တာ၊ ရာသီလာလျှင် ဆီးစပ်ကိုက်တာမျိုးရှိနိုင်ပေမယ့် ၃လလောက်ကြာတဲ့အခါ အားလုံးပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
-ကဲ…အပျိုတွေတောင် သုံးလို့ရတယ်ဆိုမှတော့ ကလေးမမွေးထားဖူးတဲ့ အိမ်ထောင်သည်တွေလည်း သုံးလို့ရပြီပေါ့နော်။
-ဒီပစ္စည်းထည့်ရင် နာမှာလားဆိုတော့…..အထက်မှာ ပြောပြခဲ့သလိုပါပဲ…အနည်းငယ်နာနိုင်ပေမယ့် အချိန်တိုအတွင်း သက်သာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် လေဒီယာ(Lydia)ကထုတ်တဲ့ သားအိမ်တွင်းထည့်သန္ဓေတားပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်တယ့် Copper Y(ကော့ပါး ဝိုင်)ဟာ အရွယ်အစား ပိုမိုသေးတာကြောင့် ပိုထည့်ရလွယ်ပြီး သက်တောင့်သက်သာပိုရှိပါတယ်။အပျိုတွေနဲ့ ကလေးမမွေးဖူးသူတွေမှာဆိုရင် ဒီလို IUD အမျိုးအစားက ပိုမိုသင့်တော်ပါလိမ့်မယ်။
-လတ်တလော ကိုယ်ဝန်လည်းတားချင်တယ်…တစ်ချိန်ကျ ကလေးယူဖို့လည်း အစီအစဉ်ရှိတယ်…ဆိုရင်
သားအိမ်တွင်းထည့်သန္ဓေတားပစ္စည်းသည်လည်းပဲ…အပျိုရော အိမ်ထောင်ရှင်များပါ ရွေးချယ်နိုင်တယ့် ထိရောက်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါကြောင်း …….
“ဘယျလိုလူတှမှော နစေ့ဉျသောကျဆေး မသုံးသငျ့ဘူးလဲ”